भिभिआइपी पाहुना हिँड्ने बाटो: आज सडक अवरुद्ध र जाम कहाँ-कहाँ हुँदैछ ? | जनदिशा
भिभिआइपी पाहुना हिँड्ने बाटो: आज सडक अवरुद्ध र जाम कहाँ-कहाँ हुँदैछ ?
काठमाडौं, १४ भदौ । बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलन २०१८ उद्घाटनको दिन आज ९बिहीबार० विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुने भएको छ ।
बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सोल्टीमोडसम्मको सडक करिब तीन घण्टा अवरुद्ध हुने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र थाइल्याण्का पधानमन्त्री बिहिबार नै आउने भएकाले बिहान ७.४५ देखि सडक जाम भइसकेको छ । यो जाम कम्तीमा पनि १० बजे सम्म हुने र परिस्थितिवश लम्बिन पनि सक्नेछ ।
त्यस्तै, कोटेश्वर, तीनकुने, मीनभवन नयाँबानेश्वर, बबरमहल माइतीघर मण्डला, थापाथली, सहिदगेट, त्रिपुरेश्वर, टेकु सोल्टीमोड सडक अवरुद्ध हुने ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । बिम्स्टेक सम्मलेनको उद्घाटनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सहभागी राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको शिष्टाचार भेट हुने कार्यक्रम रहेको छ।
Previous Previous post: १५ दिनमा दुई बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, साउनमा मात्रै सात बलात्कार !
Next Next post: बिम्स्टेकः चौथो शिखर सम्मेलन आजबाट सुरु हुँदै